I-China i-CCTV i-2000mW ye-RF yamandla aphezulu i-RF eNde yokudluliselwa kweVidiyo ye-Wireless yeNkqubo yokuKhusela i-Wireless neFektri | Kimpok
I-CCTV i-2000mW ye-RF yamandla aMagama aMagama aNgapheliyo kuLwazi olungenantambo
I-CCTV 2000mW Amandla e-RF aphezulu Ukudluliselwa kweVidiyo eNgcweleyo eNgenazintambo Kwenkqubo yokhuseleko engenantambo
Ingcaciso ngoGqithisela i-CCTV engenantambo:
Isixhobo sokuhambisa ividiyo ngaphandle kwamacingo i-KP-A2 yeyona nto ibaluleke kakhulu kuzo zonke iinkalo zokusebenza ziintlobo ngeentlobo, kwaye amandla ayo amakhulu, alungele imeko enobunzima bemeko yendawo. Ukusetyenziswa kwe-0dB (i-eriyali yentsusa yentsusa) epheleleyo kwi-eriyali, indawo evulekileyo yokuqinisekisa ukuthunyelwa kuka-2000 ~ 5000m okanye kunjalo, ukuba ukuphakanyiswa kwe-antenna ephezulu yokufumana indlela, kukhuphukele kwi-10KM kude. Kwaye itekhnoloji yokuhambisa iyinto ebalaseleyo kwaye intsimbi ekhethekileyo ilungele ubushushu, ilungele iiyure ezininzi zomsebenzi. Igalelo lesignali kunye ne-interface eqhelekileyo ye-AV, inokusebenza ngokulula ngekhamera, i-VCD, iDVD kunye nazo zonke ezinye iindawo zokuhlangana eziqhelekileyo zeAV ezihambelanayo.
Dlulisa Amandla 2000mW
Umgama (Indawo evulekileyo) 2000 ~ 5000M
Udluliselo lwevidiyo ende kunye nomamkeli,
I-UHF ekungabonwanga ntambo yodweliso lwevidiyo eLide ...
I-COFDM Long Range Video Transmitter engu-5W Rugged NL ...
1.5 I-Watt 1.2ghz 3km Intengiso engenantambo ye-Av nge-8 C ...
I-UHF 2.4Ghz iTransmit yexesha elide iVidiyo engu-2400Mhz ...
1080P HD umgama omde woDluliso lweVidiyo Idatha E ...